खेलिरहेका केटाकेटीले गाउँ नजिकैको खोल्सामा फालिएका बोरा भित्र ५ करोड रुपैयाँ भेट्टाएपछि… - Nepali in Australia
काठमाडौ । कहिलेकाही सोच्दै नसोको घटना हुन्छ । केही हजारका नोट भेट्टाउनु त सामान्य नै हो ।तर करोडौ रुपैयाँ फेला पर्नु सामान्य पक्कै हैन । झारखण्डमा त्यहाँका स्थानीय केटाकेटीका लागि त्यस्तै एक असामान्य घटना भयो ।
बच्चाहरु बोरासँग खेल्न थाले त्यही क्रममा बोरा च्यातिएर नोट बाहिर छरिएपछि सबै चकित भए । उनीहरुले गाउँलेहरुलाई बोलाए ।
राजधानी काठमाडौको खोलामा २४ किलो माछा ! [ भिडियो सहित ]
Parle-G बिस्कुटको प्याकेटमा रहेकी बच्ची को हुन् ? यस बारे अचम्म लाग्ने तथ्यहरु हेर्नुहोस (भिडियो सहित)